gpu mining rig nwere oghere kaadị nke 65mm
1. Ethereum mining rig na-eji chipset B85, PCIE nke ala, nnukwu bandwit na ike ndakọrịta.
2. Ngwuputa ethereum akara kaadị na-anabata imewe azụ azụ, nke kwụsiri ike ma ghara imebi;akara akara + oghere ala efere, modular imewe, adaba ọrụ na mmezi, na adaba dissembly na mgbakọ.
3. Onye na-egwuputa ihe na Bitcoin nwere ike na-arụ ọrụ, dị mfe ijikwa, dị ọcha ma dị mma n'ime, ahịrị ole na ole, na ikuku ikuku na-adịghị egbochi.
4. A na-akwado kaadị eserese nke GPU miner iche iche iji belata ibu nke motherboard, belata ihe ize ndụ nke mmebi motherboard, ma mee ka kaadị eserese na-arụ ọrụ nke ọma ma nwee ogologo ndụ.
5. GPU miner case front and back dual-row fan layout, dual-channel heat dissipation, high-spolo fan, ndụ ọrụ nke awa 50,000, dị ugbu a dị ka 0.48A, nnukwu ikuku ikuku, na ogologo ndụ ọrụ.
6. The mining rig chassis nwere 65mm ultra-wide graphics card spacing, nke kwesịrị ekwesị maka ọtụtụ kaadị eserese na ahịa.
7. A na-eji efere ígwè na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ mee chassis, ọkpụkpụ ya bụ 1mm, na elu bụ ájá ojii.
8. Pụrụ iche n'ihu panel usoro, n'ihu VGA interface, USB interface, wired netwọk interface, ike interface, nwere ike deployed na uche, ọzọ mmadụ.
9. Usoro nchọpụta ọrụ kaadị ndịna-emeputa pụrụ iche, nke nwere ike ịgụ ọnụ ọgụgụ nke kaadị eserese ngwa ngwa ma chọpụta ngwa ngwa kaadị ndị na-adịghị mma.
Ụgbọ elu kaadị njikwa
1.Olee otú ị na-ekwe nkwa àgwà?
Anyị nwere ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ahịrị mmepụta ọkachamara.Na usoro mmepụta nke igwe ọ bụla.anyị na-erube isi na ụkpụrụ usoro mmepụta dị mkpa.Mgbe emechara mmepụta.A ga-anwale igwe ọ bụla nke ọma tupu ebupu ya iji hụ na enwere ike iji igwe ọ bụla ị nyere iwu mee ihe.Ọ bụrụ na ị chọrọ.anyị nwere ike izitere gị vidiyo nlele.
2.Gịnị ka m nwere ike ịzụta n'aka gị?
Igwe ngwuputa GPU.Ngwuputa ike ọkọnọ.mining graphics card.Mining machine fan.power cord na igwe na-egwuputa waya metụtara.
3.Gịnị mere ị ga-eji zụta n'aka gị kama ịzụrụ n'aka ndị na-eweta ndị ọzọ?
Anyị etinyela aka na nyocha na mmepe.mmepụta na ire nke blockchain Ngwuputa igwe metụtara ngwaahịa kemgbe 2015. Anyị nwere ọgaranya mmepụta ahụmahụ na ahịa ahụmahụ.Maka igwe ngwuputa GPU.anyị nwere ike ọkọnọ ike.Na mgbakwunye.anyị nwere ọkachamara mgbe-ahịa otu na mba ọzọ ahia otu iji hụ na onye ọ bụla ahịa nwere kasị mma ịzụ ahịa ahụmahụ.
Nke gara aga: Igwe na-egwuputa ihe na-egwupụta ihe ọhụrụ na-ekpo ọkụ - igwe na-egwuputa mkpọtụ dị ala na-akwado kaadị 4 - Hongcheng Yujin
Osote: Igwe ngwuputa chassis nwere oghere 55mm na interface ihu
Motherboard 8 kaadị in-line / PCIE/ oghere 65mm